Naya Bikalpa | राजनीतिक दलको निहित स्वार्थले मुलुक क्षेत्रियतावादमा फस्ने खतरा - Naya Bikalpa राजनीतिक दलको निहित स्वार्थले मुलुक क्षेत्रियतावादमा फस्ने खतरा - Naya Bikalpa
राजनीतिक दलको निहित स्वार्थले मुलुक क्षेत्रियतावादमा फस्ने खतरा
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ ८, ०८: ४३: १०
अस्थायी राजधानीको माग गर्दै भएको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ । देशका विभिन्न ठाँउमा आन्दोलनकारीहरुले अराजक गतिविधि गर्न थालेका छन् । उनीहरुले सरकारी कार्यालयहरुमा आगजानी गर्नुका साथै अनिश्चितकालिन बन्दको आह्वान समेत गरेका छन् ।
जसका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ भने शैक्षिक संस्था, कलकारखान, व्यापार व्यवसाय लगायतका संस्थाहरुमा बन्दको नराम्रो असर परेको छ । डोटी र धनकुटा लगायतका स्थानमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा दर्जनौ भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने धनकुटामा निषेधज्ञा गरिएको छ । विस्तारै आन्दोलनको आगो देशभर फैलिदै गएको छ । यसले भोलि अकल्पनिय क्षेति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
दलहरुबीचको ठुलो रस्साकस्सीका बीच सरकारले प्रदेश नं. १ को विराटनगर, प्रदेश नं. २ को जनकपुर, प्रदेश नं. ३ को हेटौँडा, प्रदेश नं. ४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को बुटवल, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं. ७ को धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको छ । राष्ट्रियसभा चुनावको लागि प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी अनिवार्य भएकाले नै सरकारलाई अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने दबाब थियो । सोहीअनुरुप सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकेर प्रदेशसभा बैठकअघिको बाटो मात्र खोलिदिएको हो ।
सरकारले तोकेको ठाँउ अस्थायी मुकाम मात्र हो । तर यही विषयलाई लिएर जुन रुपमा आन्दोलन भएको छ यसले देशलाई अशान्त बनाएको छ । प्रदेशको राजधानी त प्रदेशसभाको दुई तिहाई सदस्यले ताक्ने हो । संविधान मै प्रष्ट रुपमा प्रदेशसभाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अखिर आन्दोलन किन ? के आन्दोलनकारीका अगुवाहरुले संविधान नपढेरै बन्द हड्ताल गरिराखेका हुन् ? हैन भने पर्दा पछाडिको खेलाडि को त ? प्रश्न उठेको छ । यसको पछाडि राजनीतक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु नै अगाडि देखिएका छन् ।
आफुले भनेकै ठाँउमा राजधानी हुनुपर्ने उनीहरुको अडानका कारण फेरी मुलुक अशान्त हुने संभावना बढेको छ । यसले ठुलो धनजनको क्षति निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । धनकुटा, वीरगञ्ज, दाङ र डोटी लगायतका स्थानमा आन्दोलनले उग्ररुप लिदै गएको छ । यसलाई बेलैमा रोक्न नसके मुलुक क्षत्रीयतावादमा फस्ने खतरा बढेको छ ।
चुनावको बेला जुन ठाँउ गयो त्यही ठाँउमा राजधानी बनाँउछु भनेर भोट मागेका नेताहरुले अहिले सर्वसाधारण जनतालाई आन्दोलन गर्न उक्साईरहेका छन् । एउटै पार्टीका नेताहरुले आ–आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा जहाँ भन्यो त्यही राजधानी बनाउछु भनेर गरेका वाचा नै अहिलेको आन्दोलनको मुख्य कारण हो । आफ्नो निहित स्वार्थपुर्ति गर्न हदैसम्म गिर्न जानेका नेताहरुको अदुरदर्शी नीतिले फेरी मुलुकलाई द्धन्द्धतर्फ धकेलिरहेको छ ।
यस कार्यमा सबै राजनीतिक दल दोषी छन् । बंैककबाट फर्किए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएता पनि एमाले कै नेता एवम् पूर्वमन्त्री समेत भइसकेका महेश बस्नेत भने प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी हेटौँडा तोकेको विरोधमा भक्तपुरमा चक्कजाम गर्न सडकमा उत्रेकाछन् । यस्ता धेरै नेताहरु आफ्नो चुनावी वाचा पुरा गर्न जनतालाई एकआपसमा लडाइरहेका छन् । अहिले चर्किदै गएको आन्दोलनमा उनीहरु जनतालाई बलिको बोका बनाइराहेका छन् । त्यही बलिका बोकाहरु अहिले आन्दोलनको नाममा अराजक गतिविधितर्फ उन्नमुख भईरहेका छन् ।
यसले भोलि ठुलो दुर्घट्ना ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
भोलि भयवह स्थिति आईपरे यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? के यी मुठिभरका नेताहरुले जिम्मेवारी लिन सक्लान् ? हैन भने सर्वसाधारण जनतालाई कहिलेसम्म बलिको बोका बनाउने र कहिलेसम्म अराजकता मच्चईरहने ? आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कहिलेसम्म निमुखा जनताको ज्यान दाउमा लगाउने ? समाजको अगुवाई गर्ने र देशलाई डो¥याउने नेताहरु नै जनतालाई एकआपसमा जुधाउने होकि सर्वसाधारणलाई सम्झाईबुझाई गर्नेतर्फ लाग्ने हो ? यो गम्भिर विषय हो । आन्दोलमा उनीहरु जसरी बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन्
त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले मुलुकलाई नै बर्बादीतर्फ पु¥याउने छ । यसले संघीयतालाई नै धरापमा पार्ने देखिन्छ । राजनीतिक दलहको क्रियाकलापले केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट विस्तारै संघीयतामा प्रवेश गरेको मुलुकलाई फेरी पुरानै शासन व्यवस्थमा लग्न उद्धत रहेको देखिन्छ । नेताहरुले अस्थायी मुकामको विषयलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको रुपमा जसरी लिएका छन् यसले विभिन्न द्धन्द्ध झेलेर आएको मुलुक फेरी क्षेत्रीय द्धन्द्धमा फस्ने पक्क देखिन्छ ।
त्यसैले यसलाई बेलैमा रोक्न सबैले ध्यानपु¥याउन जरुरी छ । अस्थायी मुकामको विषयलाई लिएर भएको आन्दोलनको स्वरुप फरिने संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । प्रदेश नम्बर २ को राजधानी वीरगंज नबनाएको भन्दै बारा र पर्सालाई तीन नम्बर प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । अनिश्चितकालिन बन्द र हड्ताल गरिरहेका उनीहरुले माथि प्रस्तुत गरिएका विकल्प नभए बारा, पर्सा र रौतहटलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाउन पनि माग गर्न थालेका छन् ।
यस्तै समस्या दाङमा पनि देखिएको छ । कतिपय स्थानका जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रियसभा चुनाव बहिस्कार गर्ने समेतका चेतावनी दिन थालेका छन् । तर वास्तवमा चेतावनीले हैन प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रदेश राजधानी तोकिन्छ भन्ने कुरा नेताहरुले जनतासम्म पु¥याउन नसक्दा यो स्थिति आएको हो ।
सरकारले अस्थायी मुकाम तोक्नासाथ उत्तेजित भएर विरोधमा उत्रनु अर्को हास्यास्पद पनि देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई सम्झाउनुपर्ने दलका कार्यकर्ता नै ताण्डव नाचमा उत्रेपछि मुलुक अनावश्यक क्षेत्रीयतावादमा फस्ने खतरा बढ्न थालेको हो । यसले प्रमुख दलका नेता कार्यकर्ताहरुको संकीर्ण स्वार्थ रहेको भन्ने पुष्टि गर्दछ ।
आफ्नो ठाउँमा प्रदेशको राजधानी भयो भने के–के नै हुन्छ र भएन भने आफ्नो ठाँउको अस्तित्व नै बर्बाद हुन्छ भन्ने जुन कुरा नेताहरुको क्रियाकलापले देखाएका छन् त्यो वास्तविकता हैन । विश्वका विभिन्न देशका उदाहरणहरुलाई हेर्दा राजधानी भन्दा अन्य शहर औद्योगिक, व्यापारीक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक हबका रुपमा परिचित रहेको पाइन्छ । भारतमा मुम्बई शहर व्यापारिक शहरको रुपमा परिचित रहेको छ भने चीनको सांघाई, अमेरिकाको न्युयोर्क, पाकिस्तानको लाहोर लागयतका शहर राजधानी भएर चर्चित भएका होइ्नन् । तसर्थ सामाथ्र्य र पहिचानका आधारमा कुन ठाँउलाई कस्तो शहर बनाउने तर्फ सोच्ने हो भने प्रदेश राजधानी विषय यति ठुलो होइन ।
आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी शहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्नुपर्ने नेताहरु आफै तमासा देखाउन थालेका छन् । त्यसैले प्रदेशको राजधानी आफ्नो घरपायकमा आउँदैमा त्यस ठाउँको विकास हुने होइन । जनप्रतिनिधिहरुका लागि मात्र प्रदेशराजधानी भेला हुने ठाँउ हो । संविधानले स्थानीयतहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । तसर्थ सर्वसाधारण जनताको लागि प्रदेश राजधानीले जहाँ भएपनि खासै फरक पर्दैन । राजधानीको विषयलाई लिएर टाउको ठोकाठोक गर्नु भन्दा पनि आफ्नो ठाँउको छुट्टै पहिचान बनाउन तिर लाग्दा उचित देखिन्छ ।
२०७४ माघ ८, ०८: ४३: १०